तिथि मेरो पत्रु »7एक Foodie डेटिंग अघि तपाईंलाई ठेगाना हुनु पर्छ कुराहरू
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 13 2021 |2मिनेट पढ्न
जबकि म खाना को एक विशाल प्रशंसक छैन, मेरो साथी र मिति को सबै भन्दा आत्म-घोषणा खाद्य गरिएको छ. यो अवधि बस खाना को तस्वीर सामाजिक मिडिया यसलाई लिएर र पोस्ट गर्न अर्थ राख्छ. खाद्य खाना आशक्त छन्, र यो म कहाँ बस तिनीहरूले खाना लागि जाने कति टाढा सिकेका खाद्य मेरो सम्बन्ध मार्फत छ.
खाद्य सबै छ
खाना आफ्नो लत तपाईं छवि गर्न सक्छन् केहि परे जान्छ. खाद्य दिन को पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता हो. र, त्यहाँ फेला आकर्षित कुनै लाइन छ “सिद्ध” खाना वस्तु. केवल सहि स्ट्रबेरी लागि ठूलो दूरी यात्रा गर्न तयार.
“को स्वाद Savor”
यो खाना जोडा बाँध्ने कार्य गर्न आउँदा खाद्य विशेषज्ञ छन्. तिनीहरूले चावल माछा खाने वा सँगै दुई सस मिश्रण दिएको सुझाव भने, यो संग. संभावना आफ्नो सुझाव बढि flavorful हो पकवान आफ्नो आँखा खोल्न हुनेछ छन्.
खाद्य पनि बिस्तारै आफ्नो खाना टेस्टिङ द्वारा स्वाद savor गर्छन. जबकि यो मुर्ख लाग्न सक्छ, यो वास्तवमा तपाईं खाना थप जो बारी मा आफ्नो सम्बन्ध लाभ उठाउन सक्छौं बुझ्न मदत गर्नेछ.
चाहे त्यो भुकनु वा Google, तुरुन्तै नयाँ रेस्टुरेन्ट वा पकवान प्रयास पछि, आफ्नो foodie एक foodie रूपमा लागि एक समीक्षा लेखन बारे अचाक्ली उत्साहित हुनेछ, तिनीहरूले नयाँ फेला आविष्कारको अन्य खाद्य सूचित गर्न एक जिम्मेवारी महसुस.
खाने वरिपरि आफ्नो समय योजना
मिति र परिभ्रमण खाना वरिपरि Revolve हुनेछ. संभावना तिनीहरूले एक बाल्टिन सूची व्यञ्जन र रेस्टुरेन्ट पर्छ-प्रयास गरेका छन् छन्. तिनीहरूलाई Indulge, सूची हेर्न र बाहिर ती रेस्टुरेन्ट तपाईं प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ कि केही टिप्न.
खाद्य आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट मा सर्भर राम्रो मित्र बन्न. मात्र ती दुबै खाना भन्दा बांड तर सर्भर चिन्नुको छूट र / वा गोप्य व्यञ्जन सक्छ प्राप्त गर्छन्. साथै, भएको एउटा मनपर्ने सर्भर मात्र रेस्टुरेन्ट जाँदै मतलब सर्भर काम गर्दा.
मात्र आफ्नो foodie बाहिर भोजन गर्न चाहनुहुन्छ गर्छ तर तिनीहरूले ज्यादातर संभावना भान्सा मा धेरै आसान हुनेछ. जबकि तपाईं स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु प्रयास प्राप्त, खाद्य हुनेछ “हराएको” घन्टा को लागि भान्सा मा. तिनीहरूले पकाउने मुड मा प्राप्त गर्छन् जब, म तिनीहरूलाई समय खर्च गर्न भान्सा तिनीहरूलाई सामेल हुने प्रक्रिया दिएको सुझाव.
सधैं किराना पसल को स्थान थाहा
तपाईं केहि आवश्यक हुन सक्छ जब तपाईं थाह. जहाँ सबैभन्दा नजिकको किराना पसल छ खाद्य मात्र थाहा छैन तर तिनीहरूले पनि घण्टा थाहा हुनेछ. पछिल्लो मिनेट किराना पसल रन बनाउन तयार.
एक foodie डेटिङ सधैं एक साहसिक छ. आफ्नो पागल-जस्तो लत अँगालेर द्वारा, तपाईं निश्चित फेरि कहिल्यै प्रेम लागि भोक हुनेछ.